Qoritaanka Mawduuc ku mashquulsan oo beddelaya ganacsiga | Martech Zone
Qoritaanka Mawduuc ku mashquulsan oo beddelaya ganacsiga
Jimco, Nofeembar 8, 2019 Jimco, Nofeembar 8, 2019 Douglas Karr
Waxaan badanaa layaabaa markaan aqriyo maqaal layaableh qof meheraddiisa ganacsi ama baloog, laakiin markaa wax fikrad ah kama haysto cidda ay yihiin, sababta aan u doonayo inaan ula shaqeeyo, cidda ay u adeegaan, ama waxa ay iga rajeynayaan inaan sameeyo xiga goobta. Intaad maal gasho
Mawduuca si fiican loo qabtay wuxuu u baahan yahay maalgashi muhiim ah oo ku saabsan cilmi baarista, naqshadeynta maqaalka, sawirada, iyo xitaa dhiirrigelinta. Haddii aan ku dul deggo maqaalkaaga oo aniga igu dhisaya kalsooni iyo awood igu saabsan mowduuc aan baarayo… miyaad iga caawineysaa inaan fahmo waxa ay tahay tallaabooyinka xiga ee ah inaan kula macaamilo adiga ama shirkaddaada?
Waxaa laga yaabaa inaad horay u aragtay qayladayda fiidiyowga hawlgelinta, markaa waad ogtahay sida aan ka dareemayo sida eraybixintaas dabacsan loogu tuuro. Ma dhahayo qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad soo saartay waa inay ahaataa mid si toos ah loola socon karo illaa mitirka beddelka, in kasta oo ay fiicnaan lahayd. Laakiin… markaad iskudayeyso inaad aqristaha ku hagto cilmi baaristaada iyadoo ujeedadaadu tahay maskaxda… ha iloobin inaad dhab ahaan ku darto ilaha lagama maarmaanka ah, hagista, ama wicitaanada-ficilka si aad uga caawiso inay fahmaan waxa talaabooyinka xiga ay yihiin way qaadan karaan!
Furaha soo saarida waxyaabaha jira waa ogaanshaha ujeedkiisa. Haddii aad daabacayso waxyaabo kaliya si aad u ilaaliso balooggaagu inuu u muuqdo mid firfircoon oo aad la socotid soo noqnoqoshada, waxaad fahmeysaa barta dhammaantood. Waa inaad abuureysaa waxyaabo ujeedada ah inaad gaarto yoolalka gaarka ah inta lagu gudajiro howlaha horumarka.
Joseph Simborio, Isboortiga
Infografigani ka yimid Spiralytics, Mawduuca Ujeeddada Ujeeddada: Sida Loo Abuuro Mawduucyada Iskuxirayaasha, Hawlgallada, ama Beddelka, waxay bixiyaan nidaam fudud oo lagu hubinayo in waxyaabahaaga ay ku bixin karaan maalgashigooda. Burburka himilooyinku waa mid fudud oo xariifnimo leh:
Mawduuca Hawlgelinta - Mawduucu waa waxa dadka ku kaxeeya boggaaga. Laakiin waxsoosaarka ballaaran ee waxyaabaha ku jira internetka iyo isbeddelada algorithm ee joogtada ah ee Google, tayada waxyaabaha iyo qiimaha marwalba waxay noqon doonaan mudnaanta koowaad. Haddii mawduucaagu fiicanyahay, waa inuu noqdaa mid mashquuliya. Haddayna ku howlan tahay, filo taraafikada inay kororto.
Mawduucyada Xiriirinta - Mashiinnada raadinta waxay u adeegsadaan xiriiriyeyaasha sidii calaamadda kalsoonida ee algorithm maadaama ay dadku u muuqdaan inay xiriir la leeyihiin hay'ado lagu kalsoon yahay khadka tooska ah, taas oo sidoo kale ka caawisa saameynta qiimeynta raadinta. Goobaha wax lagu qoro guud ahaan waxay leeyihiin dhagaystayaal badan iyo muuqaal, taas oo sahlaysa helitaanka xiriiriyeyaal Dhab ahaan, boqolkiiba 21 Google algorithm darajadiisu waxay kuxirantahay sifooyinka hay'adaha iskuxirka ama tirada xiriidhada degel.
Mawduucyada loogu beddelayo - Himiladaada ugu dambeysa ganacsi ahaan waa inaad u weeciso rajadaada is-beddelo faa'iido leh, sidaa darteed waxyaabahaagu waa inay u guuraan dhagaystayaasha oo ay u helaan inay tallaabo qaadaan. Tani waxay booqdayaashaada u rogi doontaa hogaamin, waxay u horseedi doontaa macaamiisha, macaamiishana waxay u noqon doonaan u-doodayaal astaan.
Halkan ka fiiri faahfaahinta buuxda, oo hubi inaad gujiso oo aad akhriso maqaalka Jim gebi ahaanba faahfaahin faahfaahsan!
Tags: wac ficilladaContent Suuq
Xun: Isku Xidhka, Maareynta, iyo Falanqaynta Xogtaada Suuqgeynta